Tsy hoe afaka nanao na inona na inona i [Agence ankehitriny tsy manana anarana] haminany izany karazana olana izany. Gaga marina tokoa aho, na izany aza, amin'ny isan'ny orinasa izay tsy manao fahazotoana mendrika amin'ny fanomezana anarana ny tenany. Fantatro ny orinasa roa izay nandany vola an-taonina niaraka tamin'ireo masoivohon'ny marika, saingy ny nahitako fa ny anarany dia manana dikany mitovy hevitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, na koa ao anatin'ny indostria hafa.
Squadhelp dia tsena ahafahanao mahazo fanampiana amin'ny fanomezana anarana ny orinasanao, mahita ny anaran-tsehatra misy, ary mahazo fanampiana amin'ny fampiroboroboana ny logo anao mihitsy aza. Nanoratra ebook lehibe iray izy ireo izay misarika anao amin'ny dingana 8 amin'ny fanomezana anarana ny orinasanao:
Ataovy ny fandalinana linguistics mba hahazoana antoka fa tsy afangaro ny anarany na tsy mety amin'ny fiteny hafa.